Topnepalnews.com | को अघि को पछि मन्त्रीको दौडमा ? कुन मन्त्रालय कसलाई ?
काठमाडौं । सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै भागबन्डा नमिल्दा मंगलबार तय भइसकेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलबीच मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा सहमति हुन नसकेपछि मंंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो ।
लोकतान्त्रिक फोरमबाट जितेन्द्र देव र गोपाल दहित मन्त्री बन्दै छन् । देव पर्यटन र दहित भूमिसुधारमन्त्री बन्दै छन् । लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री छन् । सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै भागबन्डा नमिल्दा मंगलबार तय भइसकेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।